I-AirPods 3 ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye netyala lokutshaja elinikezela nge-20% ngaphezulu | Ndisuka mac
Ii-AirPods ezi-3 ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye netyala lokutshaja elinikezela nge-20% ngaphezulu
UManuel Alonso | 08/09/2021 19:00 | Amahemuhemu
Sele isemthethweni kwaye ngomhla olandelayo 14 siza kuba nomsitho we-Apple kwi-intanethi kwakhona apho kulindeleke ukuba i-AirPods 3 entsha ibhengezwe phakathi kwezinye izixhobo. . Ngokwamahemuhemu amatsha akhutshwe ngabahlalutyi bohlobo, ezi modeli zintsha zinokuza nazo ityala lokutshaja elinikezela ngakumbi ngebhetri kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo njengesiqhelo.
Uthotho olutsha lokuvuza kwiakhawunti ye-Twitter IPineLeaks, ekhokelwa ngu-leaker uMax Weinbach, uthi i-Apple izakubhengeza i-Apple Watch Series 7, ii-AirPods 3 nazo zonke, kunjalo ecaleni kwe-iPhone 13 kwiveki ezayo. Emva kwe Isibhengezo esisemthethweni sika-Apple, IPineLeaks ithathe i-Twitter isithi:
Ngokulandela isibhengezo somsitho sika-Apple sikaSeptemba, sikhupha ingxelo yethu kwiimveliso ezizayo ze-Apple, kubandakanya i-iPhone 13, iApple Watch Series 7, kunye Isizukulwana sesi-3 se-AirPods.
Ukulingana nokwaziswa komsitho we-Apple kaSeptemba, sipapasha ingxelo yethu kwiimveliso ezizayo zika-Apple, kubandakanya i-iPhone 13, uthotho lwe-Apple Watch 7 kunye ne-3rd Generation AirPods.
Nantsi into ekufuneka sabelane ngayo
-Pine (@PineLeaks) Septemba 7, 2021
Emva kwalo myalezo kuye kwafika abanye abambalwa. Kodwa ezona zinomdla kuthi yilezo zibhekisa kwisizukulwana esitsha seAirPods. Isizukulwana sesithathu siya kufika ngokwale akhawunti ngetyala lokutshaja lelo iya kunika ukuya kuthi ga kwi-20% ngaphezulu kwebhetri, eya kwenziwa ngaphandle kwentambo. Iya kwahluka kancinci kwi-AirPods Pro, ngaphandle kokurhoxiswa kwengxolo. Kodwa yonke imihla bayanda ngokufanayo.
I-AirPods ye-3th Generation Charging Case kufuneka ifumane malunga ne-20% yebhetri enkulu, xa kuthelekiswa ne-2 Gen.
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo yinto esemgangathweni.
Isandi esipheleleyo kufanele ukuba silingane njengoko ubonile kwisizukulwana sesi-2, nangona kukho ii-bass ezingcono kunye neziphelo ezisezantsi.
Ngapha koko, bathi sinokulindela "Ingcono bass kunye nesiphelo esisezantsi" xa kuthelekiswa nesizukulwana esidlulileyo. Ngaphakathi kwii-AirPods ngokwazo, iibhetri ziya kuba kubukhulu obulinganayo ne-Apple's AirPods Pro.
Iibhetri ngaphakathi kwee-AirPods ngokwazo kufuneka zijikeleze ubungakanani obufanayo nezo zifunyenwe kwi-AirPods Pro yangoku.
Ukuthetha ngeebhetri, iApple Watch Series 7 inyanzelekile ukuba ibone ukuphuculwa kobomi bayo bebhetri yoqobo ukusukela oko kubukelwe yi-Apple.
I-PineLeaks ichaze ngokuchanekileyo izicwangciso ze-Apple zangaphambili, kubandakanya iinkcukacha ze-iPhones zangaphambili kunye notshintsho kwisoftware ka-Apple. Ke kufuneka siyithathele ingqalelo le miyalezo kule veki izayo. Okwangoku, ngamahemuhemu kuphela anokuqinisekiswa ngeveki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Ii-AirPods ezi-3 ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye netyala lokutshaja elinikezela nge-20% ngaphezulu
IPodcast 13 × 03: Umnyhadala weApple ngoSeptemba 14
UFord usayine iDoug Field, usekela-mongameli weprojekthi ye-Apple Car